आयातित फर्निचरको हिस्सा घटाउँदै स्वदेशीलाई बढाउन जरुरी
बढ्दो आधुनिकीकरणसँगै आममानिसको जीवनशैली पनि परिवर्तित छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको आधुनिक जीवनशैली ग्रामीण भेगमा पनि सर्दै गएको छ । यसै क्रममा फर्निचरजन्य उत्पादन पनि जीवनशैली बदल्ने मुख्य पाटो बनिरहेको छ । पुख्र्यौली शैलीका फर्निचरजन्य उत्पादन अहिले प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक फर्निचर उत्पादनका रूपमा परिणत हुँदै आएका छन् । यसलाई आम मानिसले महत्वका साथ जीवनशैली बदल्ने पाटोका रूपमा आत्मसात् गर्दैछन्, जसले फर्निचरका उत्पादनको बजार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्दै व्यवसायका साथै बजार विस्तारको लक्ष्यसहित बर्सेनि फर्निचरजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको व्यापक सक्रियतामा अहिले फर्निचरजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहल भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी भदौ २५ गतेदेखि फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स)– २०१९ आयोजना हुँदैछ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजना तथा इभेन्ट सोलुसनको व्यवस्थापनमा आयोजना हुन लागेको फर्नेक्सलाई सन्दर्भ बनाएर कारोबारले समेटेको सम्बद्ध पक्षका विचार :
नेपालको फर्निचरजन्य उत्पादनको बजारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बजारको आकार बर्सेनि बढिरहेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ उत्पादनको आयात भइरहेको छ । प्रविधिको अधिकतम सदुपयोगले सस्तो र हेर्दा आकर्षक हुने भएकाले चिनियाँ उत्पादनको बजार हिस्सा धेरै भएको हो । हामीकहाँ काठको सहज उपलब्धता नभएका कारण स्वदेशी उत्पादनको मात्रा बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन । अझ दक्ष जनशक्ति अभावले पनि फर्निचरजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन समस्या भइरहेको छ । गुणस्तरीय उत्पादन तयार गर्न नसक्दा फर्निचरका उत्पादन आयात गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । टर्की, मलेसिया, इन्डोनेसियाबाट पनि हामीकहाँ प्रशस्त फर्निचरका उत्पादनको आयात भइरहेको छ । यी मुलुकबाट आउने उत्पादन तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्न जाने भएकाले बजार हिस्सा भने थोरै छ ।
अहिले फर्निचरका विदेशी उत्पादनले कति बजार हिस्सा ओगटेको छ ?
फर्निचरमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना पस्किँदै गर्दा दुःखका साथ भन्नुपर्ने अवस्था छ । हामी ३० प्रतिशत उत्पादनमात्र मुलुकभित्र तयार गर्न सकिरहेका छौं । ठूलो हिस्सा अर्थात् ७० प्रतिशत बजार विदेशी उत्पादनले खाइरहेको छ । रकममा कुरा गर्नुपर्दा अहिले बर्सेनि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको फर्निचरको कारोबार हुँदा धेरै हिस्सा विदेशी उत्पादनको छ । यसले पनि व्यापारघाटा बढाइरहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या काठको छ । यदि नेपाल सरकारले राम्रोसँग काठ उपलब्ध गराउने हो भने हामी ८० प्रतिशत उत्पादन नेपालमा तयार गर्न सक्छौं अनि विदेशी उत्पादनको बजार २० प्रतिशतमा सीमित गराउन पनि सकिन्छ । तर, काठको प्रक्रिया लामो अनि झन्झटिलो छ । हाम्रा फर्निचर व्यवसायीहरूले काठ सिधै वन विभागबाट पाउने अवस्था छैन, जसले गर्दा बाध्य भएर विदेशबाट काठ आयात गर्नुपरिरहेको छ । यो पक्कै पनि राम्रो अवस्था हैन ।
नेपाली काठभन्दा विदेशी काठ सस्तो पनि पर्ने भएकाले तपाईंहरू उतै केन्द्रित हुनुभएको हो ?
सस्तोभन्दा पनि विदेशी काठ सजिलोसँग पाइन्छ । नेपाली काठ त पैसा तिरेर पनि पाइने अवस्था छैन । उद्योग चलाउनलाई महँगो वा सस्तोभन्दा पनि सामान छ कि छैन भन्ने पहिलो मान्यता हो । विदेशी काठ नचलाऊँ भन्ने सोच भए पनि मुलुकको अवस्थाले बाध्यात्मक परिस्थितिमा विदेशी काठ भिœयाउनुपरिरहेको छ । मलेसिया र भारतबाट फर्निचर बनाउने काठ अनि चीनबाट प्लाई अधिक रूपमा आयात भइरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा विदेशी काठ सस्तो पनि पर्छ ।
फर्निचर क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो ?
सबैभन्दा समस्या कच्चा पदार्थको हो । ३५ अर्बको वस्तुको कारोबार गर्नु सानो कुरा होइन । ३५ अर्बको कारोबार गर्नेले प्रत्यक्ष रोजगारीमा कम्तीमा पनि एउटा पसलमा चारजना कामदार राख्दा पनि ७ सयवटा रिटेल पसलले ३ हजार कामदारलाई रोजगारी दिइरहेको छ । यो अवस्थालाई हेरेर सरकारले जनशक्ति उत्पादनका साथै कच्चा पदार्थको सहजतामा विशेष जोड दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिले ४० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशमा तयार भइरहेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्ने हो भने २ वर्षमा यसलाई ६० प्रतिशतमा उकाल्न सक्छौं ।
फर्नेक्स–२०१९ का बारेमा भन्नुपर्दा ?
सबैभन्दा पहिला त मेला अवलोकन गरी बजारमा आएका उत्पादनहरूका बारेमा जानकारी लिनका लागि सबैमा अनुरोध गर्छु । मेलामा यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका स्टल पनि रहनेछन् । विगतको अनुभवका आधारमा एउटै कम्पनीले धेरै स्टल बुक गरेको अवस्थाले उत्साहित बनाएको छ । पछिल्लो संस्करणको मेलाले राम्रो प्रतिक्रिया दिएकाले पनि हामी हरेक वर्ष झनै उत्साहित बन्दै गइरहेका छौं । पहिले भृकुटीमण्डपको हलमा मात्र प्रदर्शन हुन्थ्यो, तर अहिले बाहिर पनि डुम राख्दैछौँ । मेलामा सहभागी प्रदर्शकको अवश्यकताअनुसार स्टक तथा मेलाको क्षेत्रफलको आकार बढाइएको छ ।
आयोजकका तर्फबाट म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेलामा आएर हामीले के उत्पादन गर्दैछौं अनि तपाईंहरूको आवश्यकताअनुसारका उत्पादन हाम्रो बजारमा छन् कि छैनन् भन्ने हेरिदन आग्रह गर्छु । सामान्य अवस्थामा एउटा फर्निचरका लागि धेरै ठाउँ चहार्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ सबै कुरा एउटै छानामुनि पाइन्छ र तपार्इंहरूले हामीलाई साथ दिएर नेपाली उत्पादनलाई जोड दिनुभयो भने केही वर्षमा नै हामी आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन सक्छौं ।